Reer Nairobi iyo rajada Sweden | Somaliska
Khaar ka mid ah dadka Soomaaliyeed ee deganaanshaha ka sugaya dalka Sweden ayaa bilaabay in ay dib ugu noqdaan Soomaaliya ka dib markii ay ka niyad jabeen Sweden. Sanadkii la soo dhaafayay ayay ahayd markii Sweden ay shuruud dul dhigtay Soomaalida in ay aqoonsigooda cadeeyaan arintaas oo keentay in dadkii codsiyada gudbistay loo soo tuuray diidmo ama appeal khaarna aanba loo soo jawaabin mudo sanad ka badan. Dadka ku laabanaya Soomaaliya oo ay colaad uga soo carareen ayaa sheegaya in aysan ku noolaan karin maciishada qaaliga ah ee Nairobi ayadoo intaas u dheertay dadkooda Sweden ku nool oo mardhow sharciga qaatay kuwaas oo aan shaqeyn. Dadka sugaya in Sweden ay xayiraada ka qaado ayaan kaliya ku sugneyn Kenya ayagoo kala jooga wadamada Ethiopia iyo Uganda. Boqolaal qoys ayaa kala qeybsan oo jahweerar ku sugan kuwaasoo codsi u diraya dowlada Sweden in ay il naxariis ah ku eegto oo ay shuruuda ka qaado. C/Wahaab Xasan, Nairobi - Kenya
Khaar ka mid ah dadka Soomaaliyeed ee deganaanshaha ka sugaya dalka Sweden ayaa bilaabay in ay dib ugu noqdaan Soomaaliya ka dib markii ay ka niyad jabeen Sweden. Sanadkii la soo dhaafayay ayay ahayd markii Sweden ay shuruud dul dhigtay Soomaalida in ay aqoonsigooda cadeeyaan arintaas oo keentay in dadkii codsiyada gudbistay loo soo tuuray diidmo ama appeal khaarna aanba loo soo jawaabin mudo sanad ka badan.
Dadka ku laabanaya Soomaaliya oo ay colaad uga soo carareen ayaa sheegaya in aysan ku noolaan karin maciishada qaaliga ah ee Nairobi ayadoo intaas u dheertay dadkooda Sweden ku nool oo mardhow sharciga qaatay kuwaas oo aan shaqeyn.
Dadka sugaya in Sweden ay xayiraada ka qaado ayaan kaliya ku sugneyn Kenya ayagoo kala jooga wadamada Ethiopia iyo Uganda. Boqolaal qoys ayaa kala qeybsan oo jahweerar ku sugan kuwaasoo codsi u diraya dowlada Sweden in ay il naxariis ah ku eegto oo ay shuruuda ka qaado.
C/Wahaab Xasan, Nairobi – Kenya
Ajaanibta oo faa’iido soo galiya Sweden
February 14, 2011 at 12:32
asc salaan kadib waa run dad badan baa ku xayiran meeshaas oo swedenna ay go,aankeedu aad u saameeyey waxaan kacodsanayaa dowlada sweden iney dadkaas u fududeyso ayadoo laeegaayo shrciga bani aadannimada & kan xaqa dadka is sheegta iney isla noolaadaan ah, snälla vi behöver våran familj
Inagu waxan ka midahy dadka rajada ka qaby sweden lkn imin wan ka rajadhigy ka dib markii an rajadi anqaby igu daba dheraty wana waqti lumis wlhy tankale sweden waxa bedaly wa niman yahuud ah o kumilmay swedish waxana kow ka ah xisbisa sd marka talo tirabay noqon
Asc waxaan aad uga xunahay hadaan nahay soomaalida ku dhaqan nairobi xayiraada ay nasaartay dowlada sweden anagoo rajeyneyno iney xayiraada naga qaadi doonto dowlada sweden hadii ilaahey yiraahdo.